Mitsikia hatrany ary indray andro no ho reraka ny fampahoriana anao. - Anony - Quote Pedia
Rehefa mandia ny fiainana isika dia tsy azo ihodivirana fa hiatrika tsara ary koa ny fotoana ratsy amin'ny fiainana. Mitohy a toe-tsaina tsara sy miandrandra dia ny lakile hanampy antsika hiaina amin'ny fiainana. Raha mieritreritra ianao fa manana olana be ny fiainanao ary mahatsiaro ho tsy afa-manoatra ianao dia mitodika any amin'ny lafin'ny fiainana tsara.
Hanampy anao hitsiky izany ary rehefa manana izany optimiste mandeha izany ianao dia hahita fa manana angovo hiadiana amin'ny olanao ianao. Ny fiainana dia hijanona tsy hanome olana ho anao satria ankehitriny ianao dia matanjaka mandray izay rehetra manakaiky anao.
Tsy hahatsiaro ho sahirana intsony ny zava-manahirana. Tsy mora anefa ny hahatongavana amin'izany. Mety tsy maintsy mandalo fisalasalana sy sorena ny olona iray. Fa raha manohy ny fanantenanao ianao dia hahita ny hery hiatrehana ny olanao.
Fantaro fa na ny fotoana tsara sy ny fotoana ratsy dia ho avy amin'ny sehatra. Mandritra ny fotoana tsara, mankasitraka sy mankasitraka isaky ny fotoana. Amin'ny fotoana sarotra, hazaho hatrany ny tenanao. Makà fanampiana rehefa ilaina ary hianara ireo lesona ka lasa matanjaka kokoa ianao. Mandritra io fotoana io foana dia tohizo ny fanantenanao ary fantaro fa manana an'izany ianao mba hivelomana amin'ny fotoan-tsarotra.
Ity toe-tsaina ity dia handalo anao sy hampisy dikany ny fiainanao. Ho afaka ho azy koa ianao manampy ny hafa rehefa sahirana satria ho afaka hitantara ny zavatra niainanao ianao. Amin'izany fomba izany, isika rehetra dia afaka mahita fomba iray hifaneraseranana sy hahamanatsara ny fiainana.
Ataovy foana ny tsiky teny
Ataovy hatrany ny teny mitsiky
Quote Positive for Today
Eritreritra mety tsara ho an'ny andro
Quote ho an'ny anio
Teny momba ny fahasambarana sy ny mitsiky
Quotes amin'ny Andro
Aza reraka na manao zavatra kely ho an'ny olon-tianao. Ireo zavatra kely ireo dia mitana ny ampahany lehibe indrindra amin'ny fony. - Anonyme
Aza reraka na manao zavatra kely ho an'ny olon-tianao. Ireo zavatra kely ireo no mitana ny ampahany lehibe indrindra…
Mila fahasambarana daholo ny olona, ​​tsy misy maniry ny hirifiry, saingy tsy afaka avana avana ianao nefa tsy misy orana kely. - Anonyme
Ny fahasambarana no zavatra lehibe indrindra amin'ny fiainantsika. Miezaka foana izahay hahatratra fahasambarana. Ary hahatratra…
Misy fitsipika roa ny fiainana: # 1 Aza miala amin'ny # 2 Aza hadino foana ny fitsipika # 1. - Anonyme
Misy fitsipika roa ny fiainana: # 1 Aza miala amin'ny # 2 Aza hadino foana ny fitsipika # 1. - Teny nindramina tsy fantatra anarana:
Tsy miova amin'ny fotoana tahaka ny ataontsika Andriamanitra. - Anonyme
Ny finoana dia zavatra iray mahatonga antsika ho lasa eo amin'ny fiainantsika. Raha tsy misy finoana, tsy misy zavatra azontsika atao afa-tsy ny lehibe…
Ataovy manodidina ny olona tsara hanohana anao rehefa avy ny orana, fa tsy rehefa mamiratra ihany. - Anonyme
Miezaha manodidina ny olona tsara hanohana anao rehefa avy ny orana, fa tsy hoe rehefa mamiratra ihany. - ...